MAYELANA NATHI - zemali kanye Izikhonkwane Co., Ltd.
Ukusetha i-ngo-2004, Besilokhu wanikezela uqobo ukunikeza ezahlukene izipho kumakhasimende ayo. kokuba uchwepheshe esimise okwembali izikhonkwane, metal zemali, keychains, ibhande buckles, cufflinks ifektri iminyaka engaphezu kwengu-15, umsebenzi wethu ukuhlinzeka imikhiqizo eyigugu kakhulu amakhasimende ethu, hhayi kuphela kwi intengo kodwa futhi izinga.
Sibheka izinga kambaphambili yethu yokuqala, yonke imikhiqizo wabe igxathu negxathu ngaphakathi esiqinile izinga kwamandla ethu.
Ama-oda Wonke amakhasimende 'akuzona izinga kuphela waqinisekisa kodwa futhi ephephile kakhulu.
UMnyango wethu control izinga ingamandla ethu, zisingethwe ukuba bengamele zonke izinyathelo e lonke inqubo ukuqinisekisa ukuthi izinga kanye nobungako.
Abanothando ngalokho esikwenzayo, abasebenzi bethu uzimisele ukunikeza the best kwamakhasimende kuwe! Siphinde sibe yokuthengisa abantu ukusebenza emini noma ebusuku ukwenza ukuthi amakhasimende endaweni ezahlukene ungase uthole izimpendulo ezisheshayo uma kudingeka izingcaphuno.
Xhumana nathi manje ukuze uqalise!